Firefox 68 Husiku uye Firefox Beta 67 inouya ne-anti-minwe uye yekuchera mugodhi | Linux Vakapindwa muropa
Gore rapera, Nick Nguyen, Mutevedzeri weMutungamiri weMiti kuMozilla, akachema kuti "kuVamwe vateveri vanotumira vashandisi kune socket yemunwe", Iyo nzira inobvumira kuzivikanwa kwakavanzika kwevashandisi kuburikidza neruzivo rwunopihwa nemidziyo uye kuti vashandisi havakwanise kudzora.
Uyezve mamwe masayiti anoshandisa zvinyorwa zvinonyarara zvangu zvemari yekristpto pane mudziyo wemushandisi. Achifunga kuti "maitiro akadaro anoita kuti Webhu ive nzvimbo ine ruvengo," akavimbisa kuti "shanduro dzemunguva yemberi dzeFirefox dzinovhara maitiro aya nekutadza."
Mwedzi wapfuura, Vane ruzivo vanozivisa kuti Mozilla inoronga kubatanidza inotevera vhezheni yayo yekurwisa-chigunwe tekinoroji mune yewebhu browser inodzivirira kune dzimwe nzira dzekutsikisa zvigunwe maererano nehukuru hwehwindo, inonzi «letterboxing».
Unofanirwa kudaro chinhu ichi chinotora nguva yekuzadza saizi yewebhu browser neiyo chaiyo peji yezvinyorwa Yakareba zvakakwana kuti kodhi yekodhi iverenge zvisirizvo hwindo hwero.
1 Kudhinda minwe uye kucherwa zvisiri pamutemo hazvigamuchire
2 Firefox inopesana netsika dzakaipa uye kunaka kwevashandisi vayo
Kudhinda minwe uye kucherwa zvisiri pamutemo hazvigamuchire
Pfungwa yakajairika ndeyekuti "Letterboxing" ichavanza iwo chaiwo masendimita ewindo rinochengeta hupamhi nekukwirira kwehwindo mumawanda e200px uye 100px panguva yekushandura saizi, ichigadzira iwo akafanana mawindo evashandisi vese uyezve nekuwedzera "grey nzvimbo" kumusoro, pasi, kuruboshwe kana kurudyi rwezvino peji.
Letterboxing haisi nzira nyowani. Mozilla iri kusanganisa chinhu chakatangwa kugadzirirwa Tor browser makore mana apfuura, muna Ndira 2015.
Y ndeyekuti mhando iyi yekushungurudzwa nemawebhusaiti akasiyana siyana akawana boom kwemwedzi yakati wandei mumakore apfuura, yakadaro kesi yakakurumbira yePirate Bay mairi yakashandisa script pawebhusaiti yayo kushandisa zviwanikwa zvemakomputa evashanyi kuti iite cryptocurrency yekuchera.
Uye chinhu ndechekuti hapana munhu akange azviona, paingova nechinhu chakafanana, kuti pavakashanyira saiti komputa yavo yakatanga kudzikira uye kuti yaishandisa zviwanikwa zvakawanda. Yakanga isiri iyo kusvikira mushandisi afunga kutarisa iyo saiti kodhi kodhi uye awana iyo script.
Nayo uku kwaive kuwedzera vanhu vazhinji zvakaipa-zvine chinangwa tangisa kuwedzeredza kana kuvabaya nekodhi yeiyo cryptocurrency miner.
Imwe nyaya yakakurumbira yaive yeiyo utorrent mutengi iyo yakaita zvakafanana, shandisa komputa yevashandisi vayo kumigodhi ye cryptocurrency.
Chekupedzisira, tinogona kutaura kuti Firefox haisi browser yekutanga kushandisa rudzi urwu rwekudzivirira sezvo piyona wekudzivirira kucherwa nemawebhusaiti iri Opera.
Firefox inopesana netsika dzakaipa uye kunaka kwevashandisi vayo
Mozilla yakazivisa munguva pfupi yapfuura pane yako saiti kuburitswa kweFirefox 68 (Nightly Edition) uye Firefox Beta 67, inosanganisira chiitiko chekuyedza iyo inobvumira vashandisi kuzvidzivirira zvirinani kupokana nekutora minwe uye cryptojacking (achireva matekiniki anotendera bhurawuza kushandisa pachivande zviwanikwa zvechimwe chinhu chisiri chayo kumigodhi yemari).
Sechikamu chekuvandudza kweaya matsva ekudzivirira maturusi pamwe chete neDisconnect, muparidzi weFirefox akataura kuti anga anyora mazita emazita akasiyana siyana mukuparadzira magwaro anotyisa.
Iyo ficha haina kubvumidzwa nekutadza. Vashandisi veFirefox vachada kuenda ku: Main menyu - Sarudzo - Kuvanzika uye chengetedzo - Zvemukati kuvharira.
Ipapo ivo vanofanirwa kusarudza iyo "tsika" maitiro ekuvharisa zvirimo uye pakupedzisira kumisikidza iyo yekutora minwe uye anti-cryptojacking mabasa ebrowser.
“Mumwedzi inotevera, tichatanga kuyedza kudzivirira uku nemapoka madiki evashandisi uye ticharamba tichishanda neDisconnect kugadzirisa nekuwedzera nzvimbo dzese dzakavharwa neFirefox. Isu tinoronga kugonesa idzi dziviriro dzekumusoro kune vese vashandisi veFirefox mukuburitswa mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 68 Husiku uye Firefox Beta 67 inouya neanopokana-neminwe uye kuratidzwa kwemigodhi